ရာဇ၀တ်မှု တွေကို ကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆဲလ်ဖီးဓါတ်ပုံများ - CantWait2Say
ရာဇ၀တ်မှု တွေကို ကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆဲလ်ဖီးဓါတ်ပုံများ
General knowledge February 22, 2018
ဘာလို့အဲ့ဒီလိုသံသယ၀င်ခံရလဲဆိုရင် ထိုမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဟာ ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊Halmstad မြို့က ဘာဂါဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို
မိန်းကလေးတွေကိုခြေရာခံကြည့်တဲ့အခါမှာ သူတို့အဘိုးအဘွားတွေရဲ့ တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်တာဖြစ်ပြီး ဓားနဲ့သိုးမွှေးခေါင်းစွပ်ကို
ပါ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ ဖုန်းတွေကို ရဲအရာရှိတွေစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်း ဓားတစ်ချောင်းကိုင်ကာ နှစ်ယောက်အတူရိုက်ခဲ့တဲ့
ပုံကိုတွေ့ခဲ့ပြီးလုယက်မှုဖြစ်ချိန်က ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့တူနေမှန်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မိန်းကလေးထဲကတစ်ယောက်ဟာ အသက်
၂။နာမည်ကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရီဟားနားဟာ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာလတုန်းက ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖူးခက်ကမ်းခြေမှာ
ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုလုပ်ရင်းအနားယူခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ Loris လို့ခေါ်တဲ့အကောင်လေးတစ်ကောင်နဲ့ဓာတ်ပုံလည်းအတူတွဲ
ဒေသခံရဲတွေက ရီဟားနားရဲ့ ပုံကိုတွေ့ကာ Loris လေးတွေကို ခရီးသွားတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဘယ်သူယူလာခေါ်ထုတ်လာတာလဲ
ဆိုတာစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာက Loris လေးနှစ်ကောင်ကို ခေါ်လာတဲ့အသက် ၂၀အရွယ်ကောင်လေးနဲ့၁၆နှစ်အရွယ်
၃။၂၀၁၃ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလက အသက် ၂၆နှစ်အရွယ် Cocky Peter Cavanagh ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှု
နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူအဖမ်းခံရတာကလည်း ငွေစက္ကူတွေကိုရှုရှိုက်နေတဲ့ပုံကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ခဲ့လို့ပါပဲ။
သူဟာ လတိုင်းလိုလို ဘိန်းဖြူနဲ့ကိုကင်း ဒေါ်လ ၅၀၀၀၀ ဖိုးကျော်ဝယ်ယူကာလှည့်လည်ရောင်းချနေတဲ့သူတစ်ယောက်လည်း
ဖြစ်ပါတယ်။မူးယစ်ဆေးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် Michael Adegoke နဲ့သူဟာ မူးယစ်ဆေးတွေကို အနောက်နိုင်ငံကိုသယ်ဆောင်
သွားပြီးလန်ဒန်မြို့ကိုအမြတ်အစွန်းများစွာနဲ့ပြန်လာခဲ့တာပါ။မူးယစ်ဆေးကြောင့်ထုံထိုင်းနေတဲ့Cavanagh ဟာ မြို့ကိုရထားစီး
ပြီးပြန်လာတုန်း ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေကို ရှုရှိုက်နေတဲ့ပုံကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ
မူးယစ်ဆေးဝယ်ယူထားတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဟာ ရှာဖွေစစ်ဆေးခံရပြီးသူတို့ဆီကနေတစ်ဆင့် မူးယစ်ဆေးခေါင်းဆောင်နဲ့
Cavanagh တို့ကိုခြေရာခံမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းထဲမှာ သက်သေခံဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
၄။ထောင်ထဲမှာမိုဘိုင်းဖုန်းတွေသုံးစွဲခွင့်၊ယူခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ထောင်သားနှစ်ယောက်ဟာ သူတို့ထောင်ကျနေတဲ့ပုံစံကို
ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာတင်ခဲ့ပြီးနောက် ရဲတွေရဲ့ စစ်ဆေးမှုကိုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ပုံထဲမှာက သူတို့ဟာ ထောင်ကျနေပေမဲ့ အခန်းကျဉ်းထဲမှာ
ရဲတွေသိရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ အကုန်အသိမ်းခံခဲ့ရပြီး အကျဉ်းသားဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့
ထောင်ဒဏ်ခံရနိုင်ပါတယ်။၂၀၀၉ခုနှစ်ဇူလိုင်ကနေ ၂၀၁၁ ဇွန်လကြားထဲမှာလည်း လူသတ်သမားတွေအပါအ၀င်
အကျဉ်းသား ၃၄၂ယောက်ဟာ အကျဉ်းခန်းသော့ပိတ်ထားတုန်းက ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုတာကိုတွေ့ရှိဖမ်းမိခဲ့သေးတယ်လို့
၅။Aaron Hernandez ဆိုသူဟာ ဘော်စတွန်မြို့ကဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Odin Lloyd ကိုသတ်မှုနဲ့သံသယအ၀င်ခံရပြီး
အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။Aaron Hernandez ဟာ လက်ထဲမှာသေနတ်ကိုင်ထားပြီးမှန်ရှေ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရာမှ
ရှိခဲ့တာကိုစုံစမ်းသိခဲ့ပါတယ်။Aaron Hernandez ဟာ ထိုဘောလုံးသမားနဲ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ
ပြဿနာတွေရှိခဲ့ပြီး Aaron Hernandez အိမ်ရဲ့ တစ်မိုင်အကွာပန်းခြံထဲမှာ Odin Lloyd ရဲ့ အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၃နှစ်အရွယ် Hernandezဟာသေနတ်ကိုင်ပြီးဆဲလ်ဖီရိုက်တာကြောင့်လိုင်စင်မပါပဲ သေနတ်ကိုင်ဆောင်မှု၊ထုထည်အားပြင်း
၆။ယူအက်စ်ပြည်နယ်တစ်ခုမှာနေထိုင်ပြီးလော့အိန်ဂျလိစ်မှာ Ritz Carlton condominium တစ်ခုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်တဲ့
Napoles ဆိုသူအမျိုးသမီးဟာ ဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့အိမ်ကိုလည်း ဒေါ်လာ ၃၃၉၀၀၀ ကျပ်နဲ့ရောင်းချဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝ
သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ သူမရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုလည်းမကြာခဏဆိုသလို အွန်လိုင်းမှာဓာတ်ပုံတွေတင်လေ့
ရှိပါတယ်။သူမရဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့်စွာနေထိုင်မှုပုံစံတွေက လူကြားထဲမှာပျံ့နှံ့နေခဲ့တဲ့အတွက်သူမရဲ့ အမေဖြစ်သူ Janet
ဟာ ဒေါ်လာသန်း ၂၃၀နီးပါးအလွဲသုံးစားလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့မသင်္ကာမှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သမီးဖြစ်သူဟာ
တစ်ချို့ကတော့ အဲ့ဒီပုံတွေဟာ အွန်လိုင်းမှာနဂိုရှိပြီးသား ပုံတွေဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောခဲ့ကြပါတယ်။
၇။ Louisiana ပြည်နယ် ၊Palm Beach County Sheriff’s Office မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာ iPad ပျောက်ဆုံးသွားလို့
ခိုးသွားတဲ့သူကိုရှာဖွေနေပြီးမကြာခင်မှာပဲ ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အမျိုးသမီးဟာ Boca Raton မြို့က ပန်းခြံတစ်ခုမှာ ကားတစ်စီးထဲ
ခိုးဝင်ခဲ့ပြီးသိပ်မကြာခင်ရက်မှာသူမခိုးယူခဲ့တဲ့ iPad နဲ့ဓာတ်ပုံအနည်းငယ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ပန်းခြံထဲမှာ iPad ခိုးခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီး
ကသူမရဲ့ ကလေးတွေနဲ့ဆော့ကစားနေတုန်း ပုံထဲကအမျိုးသမီးက ခိုးယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေတက်လာပြီး
နောက်ပိုင်း တခြားမိဘတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ ကားတွေဖောက်ထွင်းခံရတဲ့အကြောင်းတိုင်ကြားခဲ့တဲ့အတွက် လိုက်ရှာစုံစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
iPad ပျောက်ဆုံးသူအမျိုးသမီးကလည်း သူမရဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှန်သမျှကိုပြောပြတဲ့လူတိုင်းကို ငွေကြေးနဲ့
၈။အသက် ၁၉နှစ်အရွယ် Albert Wilson ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ အသက် ၁၆နှစ်အရွယ်ကောင်လေးရဲ့ ဆမ်ဆောင်းဂလက်စ်ဆီ
စမတ်ဖုန်းကို ခိုးယူခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့အတူ တခြားသူငယ်ချင်းတွေကလည်း ကြံရာပါလုယက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုယက်ပြီးမကြာခင်
မှာပဲ Albert Wilson ဟာ ဆဲလ်ဖီပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူက အဲ့ဒီဖုန်းဟာ ဓာတ်ပုံတွေကိုပိုင်ရှင်ရဲ့ အီးမေးလ်ကိုအလိုအလျောက်
ပြသတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ Albert Wilson ကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီးခိုးမှု အပြင် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲထားတယ်လို့သံသယ၀င်ခံ
၉။ဓားပြလေးယောက်ဟာ Kent ပြည်နယ်နဲ့ Sussex ပြည်နယ်တို့ကဆိုင်တွေမှာ ပိုက်ဆံတွေ၊စီးကရက်တွေ၊ဖဲထုပ်တွေကို
လုယူအကြမ်းဖက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ ဓားပြမှုက မပိရိခဲ့ပါဘူး။သေနတ်ကိုင်ဓားပြတစ်ယောက်ဟာ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံ
နဲ့ ညအိပ်ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုအွန်လိုင်းမှာတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညအိပ်ဝတ်စုံဟာ ဓားပြတိုက်ခံရတဲ့အိမ်က ညအိပ်ဝတ်စုံ
ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာမှ သူတို့အကြောင်းကိုသိပြီးနောက်ဆုံးမှာ ဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ရာဇဝတျမှု တှကေို ကိုဖွရှေငျးနိုငျခဲ့တဲ့ ဆဲလျဖီးဓါတျပုံမြား
ဘာလို့အဲ့ဒီလိုသံသယဝငျခံရလဲဆိုရငျ ထိုမိနျးကလေးနှဈယောကျဟာ ဆှီဒငျနိုငျငံ၊Halmstad မွို့က ဘာဂါဆိုငျတဈဆိုငျကို
မိနျးကလေးတှကေိုခွရောခံကွညျ့တဲ့အခါမှာ သူတို့အဘိုးအဘှားတှရေဲ့ တိုကျခနျးမှာနထေိုငျတာဖွဈပွီး ဓားနဲ့သိုးမှေးခေါငျးစှပျကို
ပါ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။သူတို့ရဲ့ ဖုနျးတှကေို ရဲအရာရှိတှစေဈဆေးတဲ့အခါမှာလညျး ဓားတဈခြောငျးကိုငျကာ နှဈယောကျအတူရိုကျခဲ့တဲ့
ပုံကိုတှခေဲ့ပွီးလုယကျမှုဖွဈခြိနျက ကြူးလှနျခဲ့တဲ့သူတှနေဲ့တူနမှေနျးစဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။မိနျးကလေးထဲကတဈယောကျဟာ အသကျ
၂။နာမညျကြျောအဆိုတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ ရီဟားနားဟာ ၂၀၁၃ စကျတငျဘာလတုနျးက ထိုငျးနိုငျငံ၊ဖူးခကျကမျးခွမှော
ကမ်ဘာလှညျ့ဖြျောဖွမှေုတဈခုလုပျရငျးအနားယူခဲ့ပါတယျ။သူမဟာ Loris လို့ချေါတဲ့အကောငျလေးတဈကောငျနဲ့ဓာတျပုံလညျးအတူတှဲ
ဒသေခံရဲတှကေ ရီဟားနားရဲ့ ပုံကိုတှကေ့ာ Loris လေးတှကေို ခရီးသှားတှနေဲ့ဓာတျပုံရိုကျဖို့ဘယျသူယူလာချေါထုတျလာတာလဲ
ဆိုတာစုံစမျးခဲ့ပါတယျ။သကျဆိုငျရာက Loris လေးနှဈကောငျကို ချေါလာတဲ့အသကျ ၂၀အရှယျကောငျလေးနဲ့၁၆နှဈအရှယျ
၃။၂၀၁၃ခုနှဈ၊စကျတငျဘာလက အသကျ ၂၆နှဈအရှယျ Cocky Peter Cavanagh ဆိုတဲ့ကောငျလေးကို မူးယဈဆေးသုံးစှဲမှု
နဲ့ဖမျးဆီးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။သူအဖမျးခံရတာကလညျး ငှစေက်ကူတှကေိုရှုရှိုကျနတေဲ့ပုံကို ဓာတျပုံရိုကျပွီးတငျခဲ့လို့ပါပဲ။
သူဟာ လတိုငျးလိုလို ဘိနျးဖွူနဲ့ကိုကငျး ဒျေါလ ၅၀၀၀၀ ဖိုးကြျောဝယျယူကာလှညျ့လညျရောငျးခနြတေဲ့သူတဈယောကျလညျး
ဖွဈပါတယျ။မူးယဈဆေးဂိုဏျးခေါငျးဆောငျ Michael Adegoke နဲ့သူဟာ မူးယဈဆေးတှကေို အနောကျနိုငျငံကိုသယျဆောငျ
သှားပွီးလနျဒနျမွို့ကိုအမွတျအစှနျးမြားစှာနဲ့ပွနျလာခဲ့တာပါ။မူးယဈဆေးကွောငျ့ထုံထိုငျးနတေဲ့Cavanagh ဟာ မွို့ကိုရထားစီး
ပွီးပွနျလာတုနျး ရရှိလာတဲ့ငှကွေေးတှကေို ရှုရှိုကျနတေဲ့ပုံကိုဓာတျပုံရိုကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ကံမကောငျးစှာနဲ့ပဲ
မူးယဈဆေးဝယျယူထားတဲ့အမြိုးသမီးနှဈယောကျဟာ ရှာဖှစေဈဆေးခံရပွီးသူတို့ဆီကနတေဈဆငျ့ မူးယဈဆေးခေါငျးဆောငျနဲ့
Cavanagh တို့ကိုခွရောခံမိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဖုနျးထဲမှာ သကျသခေံဓာတျပုံတှကေိုလညျးတှရှေိ့ခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
၄။ထောငျထဲမှာမိုဘိုငျးဖုနျးတှသေုံးစှဲခှငျ့၊ယူခှငျ့မရှိပါဘူး။ဒါပမေဲ့ ထောငျသားနှဈယောကျဟာ သူတို့ထောငျကနြတေဲ့ပုံစံကို
ဖဘှေ့တျချမှာတငျခဲ့ပွီးနောကျ ရဲတှရေဲ့ စဈဆေးမှုကိုခံယူခဲ့ရပါတယျ။ပုံထဲမှာက သူတို့ဟာ ထောငျကနြပေမေဲ့ အခနျးကဉျြးထဲမှာ
ရဲတှသေိရှိသှားတဲ့အခါမှာတော့ အကုနျအသိမျးခံခဲ့ရပွီး အကဉျြးသားဝတျစုံကိုဝတျဆငျခဲ့ရပါတယျ။အဲ့ဒါအပွငျ ပိုပွီးပွငျးထနျတဲ့
ထောငျဒဏျခံရနိုငျပါတယျ။၂၀၀၉ခုနှဈဇူလိုငျကနေ ၂၀၁၁ ဇှနျလကွားထဲမှာလညျး လူသတျသမားတှအေပါအဝငျ
အကဉျြးသား ၃၄၂ယောကျဟာ အကဉျြးခနျးသော့ပိတျထားတုနျးက ဆိုရှယျမီဒီယာကိုအသုံးပွုတာကိုတှရှေိ့ဖမျးမိခဲ့သေးတယျလို့
၅။Aaron Hernandez ဆိုသူဟာ ဘျောစတှနျမွို့ကဘောလုံးကစားသမားတဈယောကျဖွဈတဲ့ Odin Lloyd ကိုသတျမှုနဲ့သံသယအဝငျခံရပွီး
အဖမျးခံခဲ့ရတယျလို့သိရပါတယျ။Aaron Hernandez ဟာ လကျထဲမှာသနေတျကိုငျထားပွီးမှနျရှမှေ့ာဓာတျပုံရိုကျခဲ့ရာမှ
ရှိခဲ့တာကိုစုံစမျးသိခဲ့ပါတယျ။Aaron Hernandez ဟာ ထိုဘောလုံးသမားနဲ့သူငယျခငျြးတှဖွေဈခဲ့ပါသေးတယျ။နောကျပိုငျးမှာ
ပွဿနာတှရှေိခဲ့ပွီး Aaron Hernandez အိမျရဲ့ တဈမိုငျအကှာပနျးခွံထဲမှာ Odin Lloyd ရဲ့ အလောငျးကိုတှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အသကျ ၂၃နှဈအရှယျ Hernandezဟာသနေတျကိုငျပွီးဆဲလျဖီရိုကျတာကွောငျ့လိုငျစငျမပါပဲ သနေတျကိုငျဆောငျမှု၊ထုထညျအားပွငျး
၆။ယူအကျဈပွညျနယျတဈခုမှာနထေိုငျပွီးလော့အိနျဂလြိဈမှာ Ritz Carlton condominium တဈခုကိုလညျးပိုငျဆိုငျသူဖွဈတဲ့
Napoles ဆိုသူအမြိုးသမီးဟာ ဖိလဈပိုငျမှာရှိတဲ့အိမျကိုလညျး ဒျေါလာ ၃၃၉၀၀၀ ကပျြနဲ့ရောငျးခဖြို့ကွိုးစားနတေဲ့ ခမျြးသာကွှယျဝ
သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။သူမဟာ သူမရဲ့နထေိုငျမှုပုံစံတှကေိုလညျးမကွာခဏဆိုသလို အှနျလိုငျးမှာဓာတျပုံတှတေငျလေ့
ရှိပါတယျ။သူမရဲ့ အဆငျ့အတနျးမွငျ့စှာနထေိုငျမှုပုံစံတှကေ လူကွားထဲမှာပြံ့နှံ့နခေဲ့တဲ့အတှကျသူမရဲ့ အမဖွေဈသူ Janet
ဟာ ဒျေါလာသနျး ၂၃၀နီးပါးအလှဲသုံးစားလုပျထားတယျဆိုတဲ့မသင်ျကာမှုနဲ့တရားရငျဆိုငျနရေပါတယျ။သမီးဖွဈသူဟာ
တဈခြို့ကတော့ အဲ့ဒီပုံတှဟော အှနျလိုငျးမှာနဂိုရှိပွီးသား ပုံတှဖွေဈတယျလို့အခိုငျအမာပွောခဲ့ကွပါတယျ။
၇။ Louisiana ပွညျနယျ ၊Palm Beach County Sheriff’s Office မှာရှိတဲ့တာဝနျရှိသူတှဟော iPad ပြောကျဆုံးသှားလို့
ခိုးသှားတဲ့သူကိုရှာဖှနေပွေီးမကွာခငျမှာပဲ ပုံထဲမှာပွထားတဲ့အမြိုးသမီးဟာ Boca Raton မွို့က ပနျးခွံတဈခုမှာ ကားတဈစီးထဲ
ခိုးဝငျခဲ့ပွီးသိပျမကွာခငျရကျမှာသူမခိုးယူခဲ့တဲ့ iPad နဲ့ဓာတျပုံအနညျးငယျရိုကျခဲ့ပါတယျ။ပနျးခွံထဲမှာ iPad ခိုးခံလိုကျရတဲ့အမြိုးသမီး
ကသူမရဲ့ ကလေးတှနေဲ့ဆော့ကစားနတေုနျး ပုံထဲကအမြိုးသမီးက ခိုးယူခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ ဓာတျပုံတှတေကျလာပွီး
နောကျပိုငျး တခွားမိဘတှကေလညျးသူတို့ရဲ့ ကားတှဖေောကျထှငျးခံရတဲ့အကွောငျးတိုငျကွားခဲ့တဲ့အတှကျ လိုကျရှာစုံစမျးခဲ့ကွပါတယျ။
iPad ပြောကျဆုံးသူအမြိုးသမီးကလညျး သူမရဲ့ ပစ်စညျးနဲ့ပတျသကျတဲ့သတငျးမှနျသမြှကိုပွောပွတဲ့လူတိုငျးကို ငှကွေေးနဲ့
၈။အသကျ ၁၉နှဈအရှယျ Albert Wilson ဆိုတဲ့ကောငျလေးဟာ အသကျ ၁၆နှဈအရှယျကောငျလေးရဲ့ ဆမျဆောငျးဂလကျဈဆီ
စမတျဖုနျးကို ခိုးယူခဲ့ပါတယျ။သူနဲ့အတူ တခွားသူငယျခငျြးတှကေလညျး ကွံရာပါလုယကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။လုယကျပွီးမကွာခငျ
မှာပဲ Albert Wilson ဟာ ဆဲလျဖီပုံရိုကျခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေဲ့သူက အဲ့ဒီဖုနျးဟာ ဓာတျပုံတှကေိုပိုငျရှငျရဲ့ အီးမေးလျကိုအလိုအလြောကျ
ပွသတိုငျကွားခဲ့ပါတယျ။နောကျဆုံးမှာတော့ Albert Wilson ကိုဖမျးမိခဲ့ပွီးခိုးမှု အပွငျ မူးယဈဆေးသုံးစှဲထားတယျလို့သံသယဝငျခံ
၉။ဓားပွလေးယောကျဟာ Kent ပွညျနယျနဲ့ Sussex ပွညျနယျတို့ကဆိုငျတှမှော ပိုကျဆံတှေ၊စီးကရကျတှေ၊ဖဲထုပျတှကေို
လုယူအကွမျးဖကျခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေဲ့သူတို့ရဲ့ ဓားပွမှုက မပိရိခဲ့ပါဘူး။သနေတျကိုငျဓားပွတဈယောကျဟာ သနေတျကိုငျထားတဲ့ပုံတဈပုံ
နဲ့ ညအိပျဝတျစုံဝတျထားတဲ့ပုံတဈပုံကိုအှနျလိုငျးမှာတငျခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီညအိပျဝတျစုံဟာ ဓားပွတိုကျခံရတဲ့အိမျက ညအိပျဝတျစုံ
ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒီနောကျရဲတှကေစုံစမျးစဈဆေးခဲ့ရာမှ သူတို့အကွောငျးကိုသိပွီးနောကျဆုံးမှာ ဖမျးဆီးမိခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
Little Mermaid နဲ့ Homer’s sirens တို့ကိုတော့ ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီသုံးယောက်ကပြောထားတာကတော့ ရေသူမတွေဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်မှုသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၀၉ခုနှစ် အစ္စရေးရဲ့ Kiryat Yam ရေစပ်အနားမှာ ထူးဆန်းတာတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကနေ အစပြုခဲ့ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြင်ရတဲ့သူတွေများလာပါတယ်။ ကမ်းစပ်နားမှာ ကစားနေတဲ့ ရေသူမတစ်ကောင်ကို …
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကြော်ငြာပုံကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို တန်းခန့်မှန်းလို့ရနိုင်မယ့် ကြော်ငြာအချို့အပြင် အညွှန်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။ 1.Audio Books 2.ဟေးး ဒူးးနော် ဒူးအတွက်ပါ… 3.Girl or letter? 4.ဒါဟာတကယ်တော့စက္ကူစကိုနေသားတကျလေးခေါက်ထားတာပါ။ 5.Making Sound Sexyပဲနော် Making Body Sexyမဟုတ်ဘူးးး Hahaxzzzzz! 6.Razor …
မိဘတွေကွယ်လွန်ပြီး ၄ နှစ်အကြာမှာ မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေး
ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် မိဘတွေ ကွယ်လွန်ပြီး ၄ နှစ်အကြာမှာ သူတို့ရဲ့ရင်သွေးကို အငှါးကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းက ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ လင်မယား နှစ်ဦးဟာ ဖန်ပြွန်သန္ဓေသား နည်းပညာနဲ့ ကလေးယူဖို့ မျှော်လင့်ပြီး သန္ဓေသား တော်တော်များများ အအေးခံထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလင်မယားနှစ်ယောက် ကွယ်လွန်သွားပြီး နောက်မှာ နှစ်ဖက်မိဘတွေက အအေးခံထားတဲ့ …